Jabuuti oo shaacisay xilliga ay bixisay lacagtii la la'aa ee gurmadka Beledweyne iyo cidda ay u dhiibtay - Caasimada Online
Home Warar Jabuuti oo shaacisay xilliga ay bixisay lacagtii la la’aa ee gurmadka Beledweyne...
Jabuuti oo shaacisay xilliga ay bixisay lacagtii la la’aa ee gurmadka Beledweyne iyo cidda ay u dhiibtay
Beledweyne (Caasimadda Online) – Dowladda Jabuuti ayaa xaqiijisay in lacagtii ay ugu deeqeen fatahaadaha Magaalada Beledweyne ay ku wareejiyeen Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta musoobooyinka Soomaaliya.
Safiirka Jabuuti u fadhiyo Soomaaliya Aadan Xasan Aadan (Belello) ayaa idaacadda VOA u sheegay in lacagtaas oo gaareyso illaa $600,000 ay Dowladda ku wareejiyeen 7 bil ka hor sida uu hadalka u dhigay.
Safiirka oo wax laga waydiiyey haddii ay la socdeen in lacagtii ay ugu deeqeen Fatahaadaha Beledweyne aanan la gaarsiin dadkii loogu tagalay ayuu sheegay in arrimahaas ay yihiin kuwa farsamo oo laga rabay Dowladda Soomaaliya.
Hadalka kasoo baxay Dowladda Jabuuti ayaa kusoo aadayo xilli Madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare uu sheegay in lacagtaas lasoo gaarsiiyey shalay oo ay taariikhdu aheyd 10 May, kadib markii guddiga ay qeyliyeen.
Guddiga Gurmadka Beleweyne ayaa 7-dii bishan sheegay in lacag gaareysa $600,000 oo ay dowladdu Jabuuti ugu deeqday dadka ay fatahaaduhu saameeyeen aanay iyagu soo gaarin taasoo keentay in Shalay lacagtaas lagu wareejiyo Madaxweynaha Hirshabelle.
Halkaan hoose ka dhageyso wareysiga Safiirka